Cube simbe Umhlaba Rubik udonsela inqwaba abantu. Bayanda kukhona tinhlobo letinsha puzzle bezijabulisa, isibonelo, "megaminx". Indlela ukuqoqa ke, ukuze uthole injabulo inqubo?
Puzzle ngesimo a dodecahedron yasungulwa okusekelwe zakudala Cube Rubik sika. Ukuqoqa ke kuyinkimbinkimbi nakakhulu.
Kuyini amabhere ezithakazelisayo "megaminx"? Indlela ukuqoqa ke, ungabona ngemva algorithm ukuhlaziywa. Isici esikhethekile wukuthi ubuso ungakwazi zungezisa ngokwewashi kanye nokuhamba kwewashi 180 degrees.
Kunalokho kuyinkimbinkimbi inhlangano inqubo inikeza ayisithupha umbala iphazili ukubulawa okufana okungukuthi Okwamanje akukacaci.
Izimfihlo inhlangano cube
Kanjani ukuze ahlangane "megaminx"? Wabasaqalayo, zikhona izinzuzo kanye nemihlahlandlela lula lo msebenzi. Puzzle kwenzekani algorithm esidalelwe cube the Rubik, kodwa inqubo kuhlukile "megaminx" unezitho ezihambayo more.
Puzzle kusiza ukuthuthukisa intelligence ukuqapha. Ithoyizi kuyoba mnandi for bonke ubudala. Ukuqeqesha inhlangano amakhono, uyoba ngcono ijubane umcabango. Kukholakala ukuthi puzzle isiza ukugcina omoya nokucacisa kwengqondo ngisho naseminyakeni eminingi ezayo.
Professionals ukwazi indlela babuthane cube a Rubik sika. "Megaminx" uye undab 'uzekwayo inqwaba abalandeli ahlele imincintiswano. Kuyabajabulisa ukwabelana izimfihlo zabo futhi izindaba ezihlobene nala ezisunguliwe engavamile.
Ngokuthakazelisayo, isikhathi irekhodi lenhlangano imizuzwana 33,17 nje! Wonke fan of amathoyizi ezinjalo ungazama ngiziqoqele isivinini.
Izinhlobo amabhlogo "megaminx"
Ngisho puzzle zidinga ukuthuthukiswa ezintsha kanye ezingcono. Fans of "megaminx" kuphawula izinhlobo eziningana, zehlukene eyinkimbinkimbi kanye nomklamo:
Yehluka nomunye ngenani izingqimba. Lapho, kuya kuba nzima nakakhulu ukuqoqa puzzle.
"Megaminx" Jigsaw isibe nesithakazelo kubo bonke. Toy wenza kusukela eliphezulu plastic, isisindo isilinganiso mayelana 150 g
Utsandza kokubili ngabantwana nangabantu abadala. Ukusebenzisa kwabo iyabonakala ngesikhathi esisodwa. Puzzle game eba logic ukucabanga futhi emihle motor amakhono. Perfect izingane ukubuyisa.
Intsha beveza ukunyakaza ukuthi baletha ndawonye abalandeli Rubik sika isivinini cube inhlangano. Championship, lapho wonke umuntu kungaba khombisa emakhono abo. Le nhlangano yenkolo yokulwela united abalandeli puzzle babo bonke ubudala.
Ububanzi izinhlobo cube the Rubik unothe ngempela. Ubungcono eyenziwe nayizimfundamakhwela "megaminx". Kanjani ukuze ahlangane puzzle ngokushesha futhi kalula, bekhuluma injabulo enkulu. Lokhu kukuvumela ukwenza Championships mnandi futhi abantu abengeziwe. Yokwanda ukuthandwa puzzle yasekuqaleni kwenzeka ngo-1996, futhi ayizange yaphela kuze kube yilolu suku.
Ochwepheshe ukweluleka ukuqala cube zakudala, bese ukuhambisa izinguqulo eyinkimbinkimbi kakhulu, njengohlelo "megaminx". Indlela ukuqoqa ke, kuyokhanya emva eziningana ukuhlolwa yimpumelelo.
Uma unomuzwa wokuthi inqubo sincane kakhulu, ukuze kahle sihlole imithetho kulotshelwe cube the Rubik sika. Qonda isimo kanye ifomula, bahlanganise puzzle akunzima.
"Megaminx" kwenza kube nokwenzeka ukuba ukuzijabulisa bese ukuchitha isikhathi njengokuthi kunye, futhi nabangani, hlela umncintiswano encane.
Rauwolfia serpentina: incazelo kanye olwenzeka endaweni
Amir Khan: ipumelelo boxer British yezemidlalo